>U Kovida’s speech in detail at USF | MoeMaKa Burmese News & Media
>ABSDF Chairman in SF Bay Area
>Maung Lu Yay - Blessing in Burma 8
>U Kovida’s speech in detail at USF
ဆန်ဖရန်စင်္စကို တက္ကသိုလ်ုကီးက အဓိပတိမဵား။ ဆရာ ဆရာမ မဵား၊ မိဘမဵား နဲႛ ဧည့်သည်တော် အပေၝင်းတိုႛ –
ဆန်ဖရန်စင်္စကို တက္ကသိုလ်ုကီးက ဘြဲႛယူ ကေဵာင်းသားမဵား အပေၝင်းတိုႛ –
” သုင်္ုံခၝ ဆရာစကား နာခံ မတ်ြသားသင်ယူလေႛ ရြိသူသည် သုတ၀ဒ္ဌနီ ဗဟုသုတ တိုးပြား၏၊ သုတံ ဗဟုသုတသည် ပညာယ၀ဒ္ဌနံ ဥာဏ်ပညာ တိုးပြားစေ၏၊ ပညာယ ဥာဏ်ပညာ တိုးပြားလာသူဖင်ႛ အတဉံ အေုကာင်းအကဵြိး အကောင်းအဆိုးကို ဇာနာတိ သိ၏၊ ဥာတော အတေဉာ အသိဥာဏ် ပညာ ရြိသူသည် သုခၝ၀ဟော မိမိခဵမ်းသာမြ၊ သူတပၝးခဵမ်းသာမြ ကို ဆောင်ရကြ်ိုိံင်၏ …. ” အဲဒီလို ဗုဒ္ဌကဟောပၝတယ်၊၊
From the Commencement Ceremony for USF Graduate Students currently being conducted at the Saint Ignatius Church on the USF (Jesuit University of San Francisco) campus, I am letting all the monks – hundreds of thousands — in Burma know that you have been collectively awarded an Honorary Degree in recognition of your courage, loving kindness, compassion and commitment to conduct non-violent protests againstabrutal, repressive, military regime.
You should feel extremely honored because USF hasalong tradition of recognng the heroic efforts of people, who – like all of you — are willing to give up possessions and make the supreme sacrifices in order to secure the human and democratic rights of people especially those living “in constant fear” under oppressive dictators.
USF honored six members of the Society of Jesus were killed in El Salvador – nearly twenty years ago — for their courageous denunciations ofarepressive government. In 2003, USF conferred an honorary degree to His Holiness the Dalai Lama.